DF Somalia oo kubbad cajiib ah la ciyaaraysa Kenya (Jaadleeyda & Dowladda Kenya oo ay is tustay & xeesha ku jirta) | Hadalsame Media
DAAWO: Al Jazeera oo barnaamij qurux badan ka sameeysay magaalada Muqdisho…
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo kubbad cajiib ah la ciyaaraysa Kenya (Jaadleeyda & Dowladda...
DF Somalia oo kubbad cajiib ah la ciyaaraysa Kenya (Jaadleeyda & Dowladda Kenya oo ay is tustay & xeesha ku jirta)
TO GO WITH AFP STORY:La culture du khat au Kenya: les mirages de la déesse Miraa Photo taken on January 24, 2011 shows a pick-up truck carrying ("Miraa"-local name) Khat from Meru some 300 kilometres north of Nairobi. At least 48 hours after being harvested miraa loses all its effects, a factor that leads to a constant race against the clock to deliver it to the end user..The green hills of this region-Kenya's main khat-growing hub-are covered with medium-sized trees from which growers pluck new shoots as often a once a month, where most of the produce is exported to Somalia or to Britain.AFP PHOTO/SIMON MAINA
(Nairobi) 11 Agoosto 2020 – Jaadleeyda Miraa-ga Kenya ayay xaaladdu haatan ku xun tahay kaddib markii ay Dowladda Kenya xaaladdooda il gaar ah ku eegi waydey, sida uu qorayo The Nation.
Rajadii Jaadlayda Kenya ayaa qayootay kaddib markii ay 3-dii bishan Somalia dib u furtay duullimaadyada caalamiga, balse ay xisaabta ka reebtay Jaadka oo lagu daray liiska waxyaabaha aan daruuriga ahayn.
Waxay kasii dartay markii ay wefdi qarsoodi ah u dirsadeen DF Somalia, kaasoo looga dhaartay in xayiraadda rasmiga ah laga qaado Jaadka, iyadoo loo sheegay inay DF la hadlayso oo qura Dowladda Kenya.
Waxaa sidoo kale Jaadlayda Kenya haysta cadaadis ka socda gudaha Somalia oo lagu dalbanayo in gebi ahaanba la joojiyo Jaadka xitaa kaddib cudurka Covid-19.
Badeecada ka imanaysa Somalia
Ganacsatada Jaadka ee Kenya ayaa Nation u sheegay in wefdigooda loo sheegay in hakad ku jira Jaadkooda ay qayb ahaan sii adkaynayso moowqifka Kenya ay ku joojiyey badeecaha ka iman jirey Somalia oo ay sii raacday inay Kenya Airways hakisay duullimaadyadii Muqdisho.
Sida uu sheegay guddoonka Jaadleeyda magaalada Maua, Mohamed Qureshi, waxa uu wefdigoodu la kulmay wasiirro ka tirsan Xukuumadda Somalia oo ay qaarkood u guuxeen in Jaadka la fasoxo, rajaduna waxay u muuqatey mid wanaagsan todobaadan.
“Yeelkeede, MW Maxamed Farmaajo ayaa diidey dalabkeenna. Waxaana hadda ka war qabnaa in go’aanku aanu kaliya ku dhisnayn Covid-19 balse uu salka ku hayo moowqifka adag ee ay Kenya iska taagtey badeecooyinka ka yimaada Somalia.” ayuu ku calaacalay.
“Waxaa dhowaan la gubey bariis, sonkor iyo kalluun fara badan oo ka yimid Somalia, taasoo ay sameeyeen saraakiisha Kenya,” ayuu raaciyey Md Qureshi oo sheegay in dadkii Jaadka ku xirnaa ee magaaladiisu ay hadda qaarkood gacan doorsi gaareen oo wax loo ururiyo ku nool yihiin, isagoo Dowladda Kenya ugu baaqay inay arrinta xalliso.
Previous articleDAAWO: Nin Soomaali ah oo cashar uusan abid illaawin u dhigay nin Carab ah oo ku CANDHUUFAY!
Next articleIlhaan Cumar oo taageero ka heshay geed-fadhiga Xisbiga Dimoqraadiga (Ninka la tartamaya oo ay ku dhaaftay dhankii lagu amaanayey)
(Kharduum) 28 Sebt 2020 - Maraykanka ayaa dalka Suudaan ku cadaadinaya inuu aqbalo in qaxootiga Falastiin dalkooda lasoo dejiyo, sida uu sheegay Bassam Al-Salhi...
DAAWO: Al Jazeera oo barnaamij qurux badan ka sameeysay magaalada Muqdisho oo aad u dhismaysa (Meelaha ay ka dhiman tahay?)